Chii chekutarisa kana uchitenga iyo wiricheya:
Nguva dzose bvunza chiremba wako usati watenga a wiricheya. Iwe unogona zvakare kuita yako pachako research kuti iwe ugone kuita zvakanaka ruzivo ruzivo maererano neyako yekupedzisira kutenga.
Heano mamwe mapoinzi ekuchengeta mundangariro:
Nzvimbo yebheteri inopa simba remagetsi mavhiripu
Zvigaro zvinobviswa, zvigadziriso zvetsoka
Kupfuuridza nguva, wiricheya zvishongedzo vakazvivezera niche yavo pamusika. Unogona kusimudzira yako iripo wiricheya, kutsiva zvikamu zvakakanganisika, kusimudzira zvese kunyaradzwa, uye kushanda nezvazvino wiricheya zvishongedzo. Aya anowanikwa zvakanyanya online paunogona zvakare kuwana mazano pazvinhu zvinokodzera kune yako mavhiripu.
New mavhiripu zviripo zvekutenga online kana kuburikidza nevatengesi vepedyo. Kunyangwe iwe usingakwanise kubuda mumba, wiricheya mawebhusaiti kazhinji anonyora iyo wiricheya mamodheru, mifananidzo, mutengo, zvishongedzo nezvimwe. Unogona kungoteedzera online uye uve ne wiricheya akaendeswa kwauri. Kana iwe uri kutsvaga isingakwanise sarudzo, tarisa pane yakashandiswa mavhiripu. Kana yako kuremara ndezvenguva pfupi, a wiricheya kurenda kungave kwakanyanya kunaka sarudzo.
Ita shuwa kuti iwe unoshandisa ekuchengetedza mabhandi uye nezvimwe zvakasiyana zvekuchengetedza
Usashandise iyo wiricheya munzira dzaisina kugadzirirwa
Shandisa wiricheya nzira yakakodzera
Semuenzaniso, yemukati wiricheya zvinogona kukonzera kukuvara kune mushandisi uye chigaro kana chikashandiswa panze.
Inishuwarenzi Yako wiricheya:
Kuti uwane inishuwarenzi yako wiricheya, iwe unozofanirwa kuwana Chitupa cheKurapa Kunodikanwa (CMN) kubva kuna chiremba wako kuti uendese kana uchizadza yako murandu.
Iwe unogona kutsvaga paGoogle kuti ikubatsire iwe kuwana iyo yakanaka wiricheya. Kune vazhinji vanopa pasirese vanozofara kukubatsira kunze. Wako kuremara haafanire kuve hupenyu hunoguma kana kuvharirwa. Dzokera muhupenyu uye uwanezve kuzvimirira kwako neako wiricheya!